ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » စားနပ်ရိက္ခာတိုင်းကျောင်းသားဆက်ဆံရေးသည် သာ. ကောင်း၏ Make တတ်နိုင်သ?
အများပြည်သူကျောင်းမှာသိပ္ပံဘာသာအတန်းအစားပြန် Rewind, သငျသညျအသက်တာ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုလေ့လာသင်ယူသောအခါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးခေါင်းငါတို့ကဲ့သို့လူသားတွေလေထု၏အဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ရေးလိုအပ်ဘယ်လိုအပေါ်ပညာအတတ်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏, အသက်ရှင်ဖို့ရေနှင့်အစားအစာ. သေချာတာပေါ့, လေနှင့်ရေကိုအရေးကြီးလှသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော့်ရဲ့ကြင်နာများစွာကယ့်ကိုထုတ်ရပ်တည်နေတည်းအရေးကြီးသည်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည် အစာ. ဒါဟာငါရယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် 18 တခါတရံတွင်အစာစားအဖြစ်သူ၏အဓိကစိတ်အားထက်သန်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်သူကိုနှစ်အရွယ်အထီး, ဒါပေမယ့်ကျောင်းသားဘုံစားနပ်ရိက္ခာအတွက်ကြီးမားသောအာဏာရရှိထားသူ.
စားနပ်ရိက္ခာပြည့်စုံခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုငွေရတတ်သောသူကိုသေးပိုက်ဆံချိုးဖဲ့, အစားအစာအတူတကွမိတ်ဆွေတွေကိုဆောင်တတ်၏, အစားအစာကိုနေ့စဉ်အခမ်းအနားများအတွက်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်နှင့်မည်သည့်ကျောင်းသားဆက်ဆံရေးဟာပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်.
ငါသည်တကျော်ကြားသောသမိုင်းပညာရှင်မဟုတ်ဘူးငါမူကားကာလ၏အစအဦးကတည်းကသေချာပါတယ်, ဆက်ဆံရေးကိုသွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုခဲ့ကြသောကြောင့်, အစားအစာ၏ထွန်းကားခဲ့ကြ.
ကောင်းတဲ့လသည်-lit လှော်ရှဉ့်၏ညစာစားပွဲနဲ့အခွံမာသီးကျော်ကပ်လျက်တည်ရှိ Cavemen နှင့် cavewomen. ဗိုက်ကင်းခေတ်ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာသည်ပွဲတော်များအတွင်း shared ခံရမိတ်ဆွေတို့ကိုအကြားအရည်အသွေးကအချိန်အတစ်ချပ်. ယနေ့တွင်, ပင်ကော်ဖီရက်စွဲအဘို့အထွက်ဖြစ်နိုင်စားနပ်ရိက္ခာအချို့မျိုးကိုပါဝင်ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်. သင့်အနေဖြင့်ပွိုင့်မရ.
ပီဇာအားလုံးအချိန်အရှိဆုံးစွယ်စုံနှင့်သြဇာဆက်ဆံရေးဟာဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါ. ခဲအစဉ်အဆက်ကမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုလှပသောပီဇာရက်စွဲကိုမျှမပြောစေမည် (တကပိုကောင်းသလို fella နှင့်အတူင်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်). အတွက်အမိန့်သို့မဟုတ်မြို့တွင်းကိုပီဇာအရပ်မှတစ်ဦးကောင်းတဲ့အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်သွားတူရိုးရှင်းသောမူအယာများမဆိုဆက်ဆံရေးကိုရှင်သန်စေမည်.
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲသို့မဟုတ်နှစ်ဆယ်ရက်စွဲင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒါကြောင့်အစာကပါဝင်ပတ်သက်လျှင်သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ခံစားပျော်မွေ့နှစ်ဦးစလုံးပြီးတော့စကားပြောဆိုချက်တွေကိုပိုကောင်းစီးဆင်းမည်ကို, အပြုံးများတောက်ပတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်, သင့်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာနေပျော်ရွှင်မှုကိုပိုပြီးအပြည့်အဝနှင့်ပိုမိုဖွယ်ရှိသင့် connection နေ. အကြံထမြောက်လိမ့်မည်ဟု.
သင်ကအလုပ်လုပ်မီးဖိုနှင့်အတူအိမ်တော်၌နေထိုင်ပါက, မီးဖို, toaster, မိုက်ခရိုဝေ့သို့မဟုတ်အပူမီးခွက်ကို သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်လည်းဒီဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မာတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်. အတူတကွချက်ပြုတ်ခြင်းအားဖြင့်, သို့မဟုတ်သင့်သိသိသာသာအခြားတစ်ဦးကောင်းတဲ့ပျံ့နှံ့ပြင်ဆင်ထားရန်အလှည့်ယူပြီးတစ်ပျော်စရာအချိန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွသင်သည်ငါဆောင်ခဲ့ဦးမည် (သင့်ချက်ပြုတ်ကျွမ်းကျင်မှုအဘယ်သူမျှမဘေးတွင်ပင်လျှင် ... kd နေဆဲစားစရာဖြစ်၏).
ဒီနေအိမ်သို့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏. တနပ်စာအစီအစဉ်ကိုရှိသည်သောသူအပေါင်းတို့ကိုကျောင်းသားတွေနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မည်ဟုအဆင်းလှသောအရာတစုံတခုရှိင်. ပလပ်စတစ်တွေကိုရိုးရိုးမှန်စတုဂံနှင့်အတူ, တစ်ဦးအနည်းငယ်သာစရိတ်တူခံစားရဘယ်အရာအတွက်အစားအစာ၏ကြီးမားသောပမာဏသာရနိုင်. ပွတ်ဆွဲ, စား, ထိုသို့အလွယ်တကူရင်ခုန်စရာရှုထောင့်ပတ်သက်သည်နိုင်လျှင်. အများစုကမုန့်ညက်အစီအစဉ်များအားလုံးတောင်မှပရိဝုဏ်ကျော်နှင့်တချို့မြို့လယ်ကောင်စားသောက်ဆိုင်မှာသုံးနိုင်တယ်. ဒီစာတစ်ခုအလွယ်တကူ access ထို့ကြောင့်အဘို့အဆပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းဖန်တီးပြီးရက်စွဲများအပေါ်သွား.
အဆင့်မြင့်ပညာရေးလောကီသားတို့သည်အခုနှစ်, အစာအာဟာရမဆိုကျောင်းသားဆက်ဆံရေးဟာပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည်, ပိုကောင်း, ရုံထိုမျှလောက်ကြောက်မက်ဘွယ်ပို. သူတို့ကမေတ္တာကိုတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်မလိုအပ်ပါဘူးဆို ... ဒါပေမယ့်သေချာအစာလိုအပ်ပါတယ်.